ShweMinThar: ရဟန်းခံ ရှင်ပြုအကြောင်း သိကောင်းစရာ
ရဟန်းခံ ရှင်ပြုအကြောင်း သိကောင်းစရာ(၁)
ကမ္ဘာအသင်္ချေ လွန်လေသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံမျှ တွေ့ကြုံဆုံဆည်းခဲလှသော ဗုဒ္ဓုပ္ပါဒ ဒုလ္လဘအခါနှင့်တွေ့ကြုံရသော ယနေ့ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများသည် အလွန်မတန် ကံထူးသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ကံထူးလို့ တွေ့ကြုံကြရသော ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီး လက်လွတ် ဆုံးရှုံးမသွားဖို့ရန် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းမှာ တာဝန်ရှိနေပါသည်၊ တာဝန်ကို သိသော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အစိုးရနှင့်တကွသော ရဟန်း ရှင်လူ ပြည်သူအပေါင်းတို့သည် သာသနာတော် သန့်ရှင်းတည်တံ့ပြန့်ပွါးရေးကို ယနေ့အချိန်အခါမှာ တာဝန်ကိုယ်စီယူ၍ ဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။
၁။ သာသနာတော် သန့်ရှင်းရန် ၀ိနိစ္ဆယအဖွဲ့၊
မဟာနာယက လက်အောက်ရှိ ပညာရေးအဖွဲ့များကလည်း ပြည်တွင်း ပြည်ပ တစ်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ သာသနာဖြန့်နိုင်ရန် နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိ သာသနာ့တက္ကသိုလ် ဖွင့်လှစ်၍ စီမံကိန်းတစ်ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ထိုစီမံကိန်း အောင်မြင်ရန် ၆-လ ဆရာလောင်း မွမ်းမံသင်တန်းကိုလည်း ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်၊ ယင်းသင်တန်းမှာ သင်တန်းဆင်း နောက်ဆုံးစာမူအဖြစ် သင်တန်းသားများကို စာတမ်းများ ကျမ်းပြုခိုင်းပြီး အကဲဖြတ်ပါသည်၊ ထိုမှ ရင်းမြစ်ခံပြီး ယခု စာတမ်းဖြစ်ပေါ်လာရပါသည်။
တစ်ချိန်က အာရှတိုက်ကြီး တစ်တိုက်လုံးကို လွှမ်းခြုံခဲ့သော ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးသည် ယခုအချိန်မှာ အလွန်သေးငယ် ကျဉ်းမြောင်းနေ ပါပြီ၊ အကြောင်းကို ရှာလျှင် သာသနာတွင်း အင်အားစုများဖြစ်သည့် ရှင်ရဟန်းတို့၏ ချို့ယွင်းချက်လည်း အဓိက အကြောင်းတစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။ ရှင် ရဟန်းများ အရေအတွက်များဖို့ လိုအပ်သလို အရည်အချင်းရှိဖို့က ပို၍ လိုအပ်ပါသည်။
ဤအရည်အချင်းများ ရှင်ရဟန်းတို့ သန္တာန်မှာ ပြည့်ဝနေလျှင် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်သည် ကမ္ဘာအသင်္ချေမကပင် တည်နိုင်ပါသည်။ ထိုအရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်ဝသော ရှင် ရဟန်းများ ရဘို့ရန်မှာ-
အကြောင်းအရာတိုင်းကို သမားရိုးကျ ပုံစံအတိုင်း မဖြစ်စေဘဲ သဘောပေါက် နားလည်လွယ်အောင် ဆန်းသစ်သောပုံစံဖြင့် တင်ပြထားပါ သည်။ ၀ိနည်းလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ သုတ္တန်, အဘိဓမ္မာ လောင်း၍ ခြယ်မှုန်းထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ မှန်၏၊ ၀ိနည်းကြောင်းများကို ၀ိနည်းရှုထောင့်မှ ကြည့်လျှင် ပြောတိုင်း လုပ်၊ ထား တိုင်း နေဖို့ရန်သာ ရှိလေသည်၊ ဘာမျှ စောဒကများ တက်နေစရာ မလို၊ အာဏာ ဒေသနာဖြစ်သဖြင့် စောဒကတက်၍ မရပါ။ အာဏာဒေသနာကို စောဒကတက် ဆင်ခြေပေးကာ ကန့်လန့် တိုက်မိလို့ အာဏာဝီတိက္ကမန္တရာယ်ရှပြီး မရှုမလှ ဒုက္ခရောက်ရသော '' အရိဋ္ဌရဟန်း' နှင့် ''ကိုရင် ကဏ္ဍက'' တို့ နမူနာကလည်း အထင်အရှား ရှိနေသည်။
၀ိနည်းလာ အမိန့်အာဏာ ပညတ်ချက်များသည် သုတ္တန်, အဘိဓမ္မာ မီးမောင်း ဆလိုက် ထိုးပြလိုက်မှ ပေါ်လွင် ထင်ရှားလာပါသည်။ ဗုဒ္ဓ၏ ကရုဏာတော် ပညာတော် အစွမ်းများသည်လည်း အံ့မခန်း ချီးမွမ်းဖွယ်ရာ ပေါ်လွင်လာပါသည်။ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား၏ အလိုတော် ကရုဏာတော် ပညာတော် စွမ်းပကားများ ပေါ်လွင်အောင် တင်ပြထားပါသည်၊ နိဂုံးမှာလည်း ဤစာအုပ်ကို ဖတ်ရှုပြီး ဆုံးဖြတ်ထားကြပါ ဟုသာ တိုက်တွန်းလိုပါသတည်း။
ဒုက္ခကင်းရန် ဗြဟ္မစရိယကို ကျင့်ကြံဖို့ အရေးမှာလည်း အိမ်ရာတည်ထောင် လူ့ဘောင်၌ နေသူတို့ ပြည့်စုံအောင် မကျင့်ဆောင်နိုင်ကြပေ၊ အိမ်ရာတည်ထောင် လူ့ဘောင်၌နေရခြင်းသည် အသီးကြောင့် ပစ်ခတ်ခြင်း၊ ချိုးဖဲ့ခြင်း စသည့်ဘေးဒဏ်ခံရသော သရက်ပင်ကဲ့သို့ ဘေး ရန် များလှ၏၊ သားရေး သမီးရေး စီးပွါးရေး စသော ကြောင့်ကြဖွယ်တို့ဖြင့် ရှုတ်ထွေး ကျဉ်းမြောင်းလှ၏၊ ဆိတ်ငြိမ်ရာကို မရနိုင်၊ ရှင် ရဟန်းဘ၀ကား အသီးမသီးသော သရက်ပင် ပမာ အန္တရာယ်ကင်း၍ အေးငြိမ်းလှသည်၊ အလို နည်းခြင်း ရောင့်ရဲ လွယ်ခြင်း စသော အကြောင်းများကြောင့် ရဟန်းဘ၀ဖြင့် ပြုလုပ်ရသော လုပ်ငန်းသည် လျင်မြန်စွာ ပြီးမြောက်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် လူ့ဘောင်ကို ရှောင်ခွါ ၍ သာသနာ့ဘောင်၌ ရှင် ရဟန်းပြုကြသည်။
ရှင် ရဟန်းဖြစ်ခွင့် လုံးဝမရထိုက်သူ ၁၁-ဦးကိုလည်းကောင်း၊ ရှင် ရဟန်းဖြစ် နိုင်သော်လည်း မသင့်လျော်သူ ၃၂-ဦးကိုလည်းကောင်း ရှင် ရဟန်းပြုမပေးရန် ပညတ်ထားတော်မူ၏၊ မြတ်စွာဘုရားသည် ကြည်ညိုဖွယ် ပါသာဒိကဂုဏ်ကိုဆောင်နိုင်သော ပရိသတ်ကိုသာ လိုလားတော်မူ၏၊ သူများအထင်သေးစရာ အို နာ ကျိုး ကန်း ပရိသတ်များ မဖြစ်စေလို၊ ဘုရားလက်ထက်က သာသနာ့ဘောင် ၀င်လိုသူတိုင်းကို စိစစ်မှုမရှိဘဲ လွယ်လွယ်နှင့် ရဟန်းပြုပေးနေကြသဖြင့် သာသနာ့ဘောင်မှာ အနာကြီးရောဂါစွဲသူ၊ မြင်းဖုအနာရှိသူ၊ စသည်ဖြင့် စက်ဆုပ်ဖွယ် ပုဂ္ဂိုလ်တို့ တင်းကျမ်းပြည့်နေသည်၊ ထို့ကြောင့် မြတ်စွာဘုရားသည် ကြည်ညိုဖွယ်မကောင်းသည့် စက်ဆုပ်ဖွယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ရှင် ရဟန်း မပြုပေးဖို့ရန် သိက္ခာပုဒ်များ ပညတ်တော်မူခဲ့ရုံမက ရဟန်းခံသည့်အခါ စစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ရန်လည်း ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပါသည်။
တစ်ဖန် ရာဓပုဏ္ဏား ရဟန်းပြုချိန်မှစ၍ သရဏဂုံဖြင့် ရဟန်းပြုခွင့်ကို ရုပ်သိမ်း၍ ဉတ္တိစတုတ္ထကမ္မ၀ါစာဖြင့် ရဟန်းပြုပေးရန် ခွင့်ပြုတော်မူ သည်၊ ဉတ္တိစတုတ္ထ ကမ္မ၀ါစာ ခွင့်ပြုချိန်သည် ဘုရားဖြစ်ပြီးနောက် ၉-လကျော် ၁၀-လ အတွင်း (မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃-ခုနှစ်၊ တပို့တွဲ လပြည့်နှင့် တပေါင်းလပြည့်တို့အကြား) ဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်မှ စ၍ ယနေ့တိုင်အောင် ဉတ္တိစတုတ္ထကမ္မ၀ါစာဖြင့် ရဟန်းပြုပေးခွင့် တည်ရှိနေသည်၊ ရှင် သာမဏေပြုခွင့်ကိုကား သရဏဂုံဖြင့်ပင် မူလအတိုင်း ဆက်လက် ခွင့်ပြုထားသည်။
ဤအင်္ဂါ၃-ရပ်တွင် ဆံ မုတ်ဆိတ်ပယ်ခြင်းကိစ္စကို ရဟန်း ရှင် လူ မည်သူမဆို သင့်လျော်သလို ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်၊ သင်္ကန်းဝတ်မူကိုကား ရဟန်းတော်တို့၏ ခွင့်ပြုချက် ရယူပြီးမှသာ တစ်ဦးဦးက ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်၊ ရဟန်းတော်တို့၏ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ သင်္ကန်းဝတ် လျှင် လိင်္ဂတ္ထေနက(အသွင်ခိုးမှု) ဖြစ်သွားနိုင်သည်၊ သရဏဂုံပေးမှုကို ရဟန်းများကိုယ်တိုင်သာ ပြုလုပ်ရသည်။
သရဏဂုံ ပီပီသသ အောင်မြင်လျှင် ``တတိယမ္ပိ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ´´၌ ``မိ´´အက္ခရာအဆုံးတွင် ရှင်သာမဏေအစစ် ဖြစ်လေတော့သည်၊ သာမဏေတို့ ကျင့်သုံးအပ်သော သီလသိက္ခာ ကျင့်ဝတ်အားလုံးတို့ ကိုရင့်သန္တာန်မှာ တည်ရှိပြီးဖြစ်တော့သည်၊ သီလခံယူ ဆောက်တည်ဖွယ် မလို၊ ခံယူဆောက်တည်သော်လည်း အပြစ်မရှိ၊ မှတ်မိစေခြင်း ကျေပွန်စေခြင်း စသည့်အကျိုးများ ရရှိနိုင်သည်။
၃။ ကိလေသာ ရန်သူများ ထွက်ပြေးအောင် သရဏဂုံမန္တာန် ရွတ်ဆိုနေသည်ဟု လည်းကောင်း မြင်ကြပြီး ကောင်းချီးဟစ်အော် ကြွေး ကြော်ကြကုန်သည်။
ပုတီးစိပ်ပြီး ဗောဓိပက္ခိယတရား ပွါးများလျှင် ယခုဘ၀မှာ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ မရောက်စေကာမူ နှစ်ဘ၀ သုံးဘ၀ဖြင့်ပင် ရနိုင် ရောက်နိုင် ပါသည်၊ မှန်၏၊ သစ္စကပရိဗိုဇ်အတွက် သုတ် ၂ သုတ်ကို ဘုရားရှင်ဟောသော်လည်း သစ္စကပရိဗိုဇ်မှာ သရဏဂုံသော်မှ မတည်ပေ၊ သို့ သော် အထုံဝါသနာအကျိုးကို ရည်ရွယ်၍ဟောခြင်းဖြစ်သည်၊ သစ္စကပရိဗိုဇ်သည် အထုံဝါသနာရပြီး ၎င်းအထုံဝါသနာက ကျေးဇူးပြုသော ကြောင့် သာသနာနှစ် ၄၀၀၊ ဘ၀အားဖြင့် ၅-ဘ၀လောက်မှာပင် သီဟိုဠ် ကျွန်း၌ ကာလဗုဒ္ဓရက္ခိတထေရ် အဖြစ်ဖြင့် ရဟန္တာဖြစ်သွားပါ သည်၊ ဤသည်ကို ထောက်လျှင် အောင်ပွဲခံရဖို့ အရေး လက်တစ်ကမ်းမျှသာ ဟု ဆိုနိုင်သည်။
အရဟန္တမှ ရဟန္တာ၊ ယင်းမှ တစ်ဆင့် ရဟန်းဟု ဝေါဟာရ အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲလာသည်၊ ရဟန်းအဖြစ် ခံယူမှုကို ရဟန်းခံဟု ခေါ်သည်။
၇။ အဋ္ဌ၀ါစိကာ ရဟန်းမ- ဘိက္ခုသံဃာထံမှာ တစ်ကြိမ်၊ ဘိက္ခုနီသံဃာထံမှာ တစ်ကြိမ် ဉတ္တိစတုတ္ထကံ ပြုရသဖြင့် ဉတ်နှင့် ကမ္မ၀ါစာ ရှစ်ကြိမ် ဖတ်မှ ရဟန်းဖြစ်သော ဘိက္ခုနီများ။
၈။ ဉတ္တိစတုတ္ထကမ္မ၀ါစာဖြင့် ရဟန်းဖြစ်သူ ယခုခေတ် ရဟန်းတော်များ။
ထို ၈-မျိုးတို့တွင် ယခုခေတ်၌ ဉတ္တိစတုတ္ထရဟန်း တစ်မျိုးသာ ရှိနိုင်တော့သည်။
ယခုအခါ ရဟန်းဖြစ်အောင် ဉတ္တိစတုတ္ထကမ္မ၀ါစာဖြင့် ပြုလုပ်ရသည်၊ ယင်းသို့ ရဟန်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းကိုလည်း ရဟန်းခံသည်ဟု ခေါ်ကြသည်၊ ထိုရဟန်းခံကိစ္စ ပြီးမြောက်စေရန် အင်္ဂါ၅-ရပ်တို့ကား-
၂။ ဉတ်၏ ပြည့်စုံမှု
ရဟန်းခံမှု ကိစ္စအ၀၀သည် ရဟန်းလောင်းအပေါ် မူတည်၍ ဖြစ်ရသည်၊ ရဟန်းလောင်းကို ရဟန်းခံမှု ကိစ္စ (ဥပသမ္ပဒကံ)၏ တည်ရာ ဖြစ်သောကြောင့် ၀တ္ထု ဟု ခေါ်သည်။ အရည်အချင်းပြည့် ရဟန်းလောင်းဖြစ်ရန် ဆိုလတံ့သောအချက်များ လိုအပ်သည်။
၁။ ပဋိသန္ဓေနှင့်တကွ အသက် ၂၀-ပြည့်သူဖြစ်ရခြင်း၊
၂။ ပါရာဇိက ကျပြီးသူ မဟုတ်ရခြင်း၊
၃။ ပဏ္ဍုက်စသော ရှင် ရဟန်း မဖြစ်ထိုက်သူ ၁၁-ယောက်တွင် မပါဝင်ရခြင်း။
ဤအင်္ဂါရပ်များနှင့် ပြည့်စုံလျှင် အရည်အချင်းပြည့် ရဟန်းလောင်းဖြစ်တော့သည်။
ထိုအင်္ဂါရပ်များအပြင် လူဇာတ်ရှိသူ ယောက်ျားဖြစ်ခြင်း ဟူသော အင်္ဂါကို အပိုထည့်ကြသေးသည်၊ သို့သော် အဘဗ္ဗပုဂ္ဂိုလ်တွင် ပါဝင်သော တိရစ္ဆာန်နှင့် ပဏ္ဍုက် မဟုတ်ရခြင်းအင်္ဂါဖြင့်ပင် ယောက်ျားဖြစ်ခြင်းဟူသောအင်္ဂါပြီးတော့သည်။
ရဟန်းလောင်း၏ ပြည့်စုံရမည့်အင်္ဂါတွင် သာမဏေဖြစ်ရမည်-ဟု မဆိုခြင်းကြောင့် သာမဏေ မဟုတ်သူ လူကို ရဟန်းခံပေးလျှင်လည်း ရဟန်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ဆံမုတ်ဆိတ်ပယ်ခြင်း၊ သင်္ကန်းဝတ်ခြင်း ဟူသော အင်္ဂါရပ်များ မပါခြင်းကြောင့် ပုဆိုး အင်္ကျီဘောင်းဘီဝတ်သ များကို ရဟန်းပြု ပေးလျှင်လည်း ရဟန်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ထိုသို့ ရဟန်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း ရှင် ရဟန်းအသွင်ရှိသူကို ရဟန်းခံခြင်းသည်သာ အပြစ်ကင်း၍ သာသနာတော်နှင့် သင့်လျော်ပေသည်၊ မှန်၏၊ သပိတ်သင်္ကန်း မပြည့်စုံသူကို ရဟန်းခံပေးက ဒုက္ကဋ်အာပတ်သင့်၏၊ ထို့ကြောင့် ရှေးခေတ်မှ ယနေ့ခေတ် တိုင်အောင် ဆရာတော်များသည် လူဝတ်စားနှင့်သူကို ရဟန်းခံပေးလေ့မရှိကြ။
ဉတ် ကမ္မ၀ါစာ၏ ပြည့်စုံမှု
ဉတ်နှင့် ကမ္မ၀ါစာပါဠိများကို စနစ်တကျ မှန်ကန်ပြည့်စုံစွာ ရွတ်ဆိုလျှင် ဉတ်၏ ပြည့်စုံမှု၊ ကမ္မ၀ါစာ၏ ပြည့်စုံမှု ဖြစ်လေတော့သည်၊ (အကျယ်လိုလျှင် ပါဠိ+ အဋ္ဌကထာတို့မှာ ယူပါလေ)။
နယ်ပယ်အပိုင်းအခြားကို သိမ်-ဟု ခေါ်သည်၊ ထိုသိမ်သည်-
၁။ ရဟန်းတော်များက ကမ္မ၀ါစာဖြင့် ဖွဲ့စပ် သမုတ်ထားသော ဗဒ္ဓ သိမ်၊
၂။ ကမ္မ၀ါစာဖြင့် မသမုတ်ရဘဲ ပင်ကိုယ်ကပင် သိမ်ဖြစ်နေသော သိမ်ဟု နှစ်မျိုးရှိ သည်၊
မည်သည့် သိမ်ဖြစ်စေ သိမ်အင်္ဂါလက္ခဏာနှင့် ညီညွတ်လျှင် သိမ်၏ ပြည့်စုံမှု ဖြစ်တော့သည်။
မြတ်စွာဘုရားသည် သံဃာညီညွတ်ရေးကို အမြဲ ဦးစားပေးသည်၊ လုပ်ငန်းတိုင်း၌ စိတ်တူ ကိုယ်မျှ ဖြစ်စေရန် ညွှန်ကြားတော်မူခဲ့သည်၊ ညီညွတ်ရေးကို ရှေးရှုပြီး ပရိသတ်အရ ရဟန်းခံကိစ္စတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သော သံဃာ့ပရိသတ်ကို ယူရမည်။
သံဃာညီညွတ်ရေး- ဟူသော ပရိသတ်ပြည့်စုံမှုဖြစ်ရန် အင်္ဂါ၃-ရပ် လိုအပ်သည်၊
၁။ ရဟန်းခံကိစ္စဆောင်ရွက်ရာ အစည်းအဝေးဌာနသို့ လုံလောက်သော သံဃာ အရေအတွက် ပါဝင်တက်ရောက်ခြင်း။
၂။ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိလျက် မတက်ရောက်နိုင်သူများ၏ သဘောတူကြောင်း ဆန္ဒကို ယူခြင်း၊
၃။ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ သံဃာများတွင် တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ကန့်ကွက်မှုမရှိခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
ဤရဟန်းခံကိစ္စအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အနည်းဆုံး သံဃာ ၅-ပါး ပါဝင် တက်ရောက်မှ အောင်မြင်ပြီး မြောက်နိုင်မည်။ ရဟန်းခံကိစ္စ၌ ဆိုခဲ့ပြီးသော အင်္ဂါ၅-ရပ် ပြည့်စုံဖို့ အရေးကြီးသည်၊ အင်္ဂါရပ် တစ်ခုခု ချွတ်ယွင်းလျှင် အဆောင်အယောင် မည်မျှပင် ကြီးကျယ်ခမ်းနားစေကာမူ ရဟန်း မဖြစ်တော့၊ ထို့ကြောင့် အင်္ဂါ၅-ရပ် ပြည့်စုံအောင် အထူးဂရုစိုက်သင့်သည်။
ရဟန်းခံကိစ္စကို အောင်မြင်အောင် ဦးဆောင်လိုသော ရဟန်းသည်-
၁။ အရည်အချင်းပြည့် ရဟန်းလောင်းပုဂ္ဂိုလ်၊
၂။ အရည်အချင်းပြည့် ဥပဇ္ဈာယ်ပုဂ္ဂိုလ်၊
၃။ အရည်အချင်းပြည့် ကမ္မ၀ါစာ ဆရာ၊
၄။ ရဟန်းခံ ကိစ္စအတွက် ပြည့်စုံလုံလောက်သော ကာရကသံဃာ၊ ဤအချက်တို့ကို ပြည့်စုံအောင် ကြိုတင်စံမံထားရမည်။
၃။ သောက်ရေသုံးရေ တည်ထားခြင်း၊
၄။ နေရာခင်းခြင်း- ဟူသော ပုဗ္ဗကရဏ ၄-ပါးကို ဥပေါသထကံမှာကဲ့သို့ စီစဉ်ထားနှင့် ရမည်။
ဤလုပ်ငန်း ၄-ရပ်သည် ဥပုသ်ကံမှာသာ မဟုတ်၊ သံဃာ့ကံ အားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟု မှတ်ရ မည်၊ ဤသို့လျှင် ကြိုတင်ပြည့်စုံသင့် သည်များကို ပြည့်စုံစေပြီး ရဟန်းခံကိစ္စကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
ရဟန်းခံကိစ္စ၌ ဥတ်၊ ကမ္မ၀ါစာ ဖတ်ခြင်းကိစ္စသည်သာ ပဓာနအကျဆုံးဖြစ်၏၊ ပဓာနကိစ္စ အောင်မြင်လျှင် ရဟန်းဖြစ်တော့သည်၊ သို့သော် အထောက်အကူ ဖြစ်သည့် ရှေ့ပိုင်းလုပ်ငန်း၊ နောက်ပိုင်းလုပ်ငန်းများနှင့် တွဲဖက်လိုက်မှ ပဓာနကိစ္စ လိုလေသေးမရှိ ပြည့်စုံအောင်မြင်ပြီး အပြစ် ကင်းရှင်းနိုင်ပေမည်၊ ထို့ကြောင့် အပြစ်ကင်း၍ ပြည့်စုံအောင်မြင်သော ရဟန်းခံ ကိစ္စဖြစ်စေရန်-
၃။ နောက်ပိုင်းလုပ်ငန်း- ဟူသော ဤအစီအစဉ်များဖြင့် ပြုလုပ်ရမည်။
၁။ ဥပဇ္ဈာယ်ယူရန် ရဟန်းလောင်းအား စေခိုင်းတိုက်တွန်းခြင်း၊
၂။ ရဟန်းလောင်းအား သူပိုင် သပိတ် သင်္ကန်းများကို ပြောကြားခြင်း၊
၃။ ရဟန်းလောင်းကို သံဃာ၏ နှစ်တောင့်ထွာအရပ် အပြင်ဘက်သို့ ထုတ်ခြင်း၊
၄။ ရဟန်းလောင်းအား သင်ပြရမည့် ရဟန်းကို သမုတ်ခြင်း၊
၅။ ရဟန်းလောင်းရှိရာသို့ သွား၍ သင်ပြခြင်း၊
၆။ သင်ပြပြီးကြောင်း သံဃာအား အသိပေး၍ ရဟန်းလောင်းကို သံဃာ၏ နှစ်တောင့်ထွာအရပ်အတွင်းသို့ သွင်းခြင်း၊
၇။ သံဃာတော်၏ ခြေတော်အစုံကို ရဟန်းလောင်းအား ရှိခိုးခိုင်းပြီး ရဟန်းပြုလိုကြောင်း ခွင့်တောင်းစေခြင်း၊
၈။ ရဟန်းလောင်းအား စစ်မေးရန် သမုတ်ခြင်း၊
၉။ ရဟန်းလောင်းအား စစ်မေးခြင်း၊
ဤ ၉-ပါးကို အစဉ်အတိုင်း ပြုလုပ်ရမည်၊ ထိုသို့ ပြုလုပ်ရခြင်းအကြောင်းကို အနည်းငယ် ချဲ့ဦးအံ့။
မိမိတပည့်ကို အမြဲတမ်း ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲ စောင့်ရှောက်လျက် ချီးမြှောက် ထောက်ပံ့တတ်သူကို `ဥပဇ္ဈာယ်´ ဟု ခေါ်သည်၊ ဥပဇ္ဈာယ် ဆရာ၏ ပစ္စည်း အထောက်အပံ့၊ တရားဓမ္မ အထောက်အပံ့ မရရှိလျှင် မကြီးပွါး မတိုးတက်နိုင်၊ ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးဖို့သာ များလေသည်၊ သာသနာတော်၌ ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာ၏ အကူအညီ များစွာ လိုအပ်သည်၊ ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာသည် မိမိတပည့်ကို သားရင်းပမာ ၀တ်ပုံ စားပုံ နေ ထိုင် သွားလာ ပြောဆိုပုံမှစ၍ အစစ အရာရာ တာဝန်ယူ၍ စနစ်တကျ ညွှန်ပြပေးရသည်၊ `တပည့်မကောင်း ဆရာ့ခေါင်း´ ဆိုသလို တပည့် ညံ့ဖျင်းမှု၊ တော်ဝင် ကောင်းမွန်မှုသည် ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာများအပေါ် များစွာတည်သည်။
ဆရာမှားလျှင် တစ်သံသရာလုံး မှောက်တတ်သည်၊ ဥပဇ္ဈာယ် ဆရာမှားမှုကြောင့် အဇာတသတ် ခမျာ ယခုအချိန်အထိ ခေါင်း မဖော်နိုင်သေး၊ ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာကိုပင် မင်္ဂလာ တရားတော်၌ `ပဏ္ဍိတသေ၀န´ မင်္ဂလာဟုလည်းကောင်း သမ္ပတ္တိစက်၌ `သပ္ပုရိသူပနိဿယ´ စက် ဟု လည်းကောင်း ဆိုထားသည်၊ မဂ်ဖိုလ်ရရေးအတွက် ကလျာဏမိတ္တ အကူအညီ ရာနှုန်းပြည့် လိုအပ်သည်။
ဥပဇ္ဈာယ် အင်္ဂါ
၁။ ၁၀-၀ါ ရပြီးခြင်း၊
၂။ ဥဘတောဝိဘင်းကို နှုတ်တက်ရွရွ ရဖူးသူဖြစ်ခြင်း၊
၃။ ကံကြီး ကံငယ် ကိစ္စတို့၌ တတ်သိ နားလည်ခြင်း၊
၄။ ခန္ဓက ၀တ်တို့၌ တတ်သိ လိမ္မာခြင်း၊
၅။ နာမ် ရုပ် တရားတို့ကို ပိုင်နိုင်စွာ ဟောပြနိုင်ခြင်း၊
ဤ အင်္ဂါရပ်များနှင့် ပြည့်စုံလျှင် ဥပဇ္ဈာယ် ဆရာမြောက်သည်။
နိဿယဆရာ၏ အင်္ဂါ၊ ကျောင်းထိုင်အင်္ဂါများသည်လည်း ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာ၏ အင်္ဂါနှင့် တူသည်။
ရဟန်းလောင်း- `ဥပဇ္ဈာယော မေ ဘန္တေဟောဟိ´ ဟု ၃-ခေါက် ဆို၍ လျှောက် ထားရန်။ (မြန်မာ လိုမှာ- အရှင်ဘုရားသည် တပည့်တော်၏ ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာ ဖြစ်တော်မူပါ- ဟု ဖြစ်သည်) ဥပဇ္ဈာယ် ဆရာက- `ပါသာဒိကေန သမ္ပာဒေဟိ´ ဟု ပြန်လည် မိန့်ကြားရန်။ (မြန်မာလို အဓိပ္ပါယ်မှာ- ကြည်ညိုဖွယ်ကို ဆောင်နိုင်သော ကိုယ် နှုတ် အမူအရာတိုဖြင့် သီလ သမာဓိ ပညာ သုံးဖြာသော သိက္ခာကို ပြီးစေလော့- ဟု ဖြစ်သည်)
သပိတ် သင်္ကန်း ပြောကြားခြင်း
ဘုရားလက်ထက်က ကိုယ်ပိုင် သပိတ်သင်္ကန်း မရှိသူများကို ရဟန်းပြုပေး ကြသဖြင့် တိတ္ထိ တက္ကတွန်းများပမာ ဗလာကိုယ်ထည်း လက် ချည်းသာလျှင် ဆွမ်းခံဝင်သဖြင့် လူမြင်မကောင်း သည်ကို အကြောင်းပြု၍ ကိုယ်ပိုင်သပိတ် သင်္ကန်း မရှိသူများကို ရဟန်းမပြုပေးရန်၊ ပြု ပေးလျှင် ဒုက္ကဋ်အာပတ် သင့်စေရန် ပညတ်တော်မူခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့် ပရိက္ခရာတွင် ပါဝင်သည့် ဤသပိတ် ဤသင်္ကန်းများသည် သင် ရဟန်းလောင်း၏ ကိုယ်ပိုင် သပိတ် သင်္ကန်းများ ဖြစ်သည်ဟု ရဟန်းလောင်းအား ပြောကြားထားရသည်။
အဆိုပါ အဓိကဖြစ်သော သပိတ် သင်္ကန်းနှင့် ကျန်ပရိက္ခရာများလည်း ရဟန်းတို့အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများသာဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် ရဟန်း အသုံးအဆောင် ပရိက္ခရာများကို-
၂။ နှစ်ထပ် သင်္ကန်းကြီး
၃။ ဧကသီ သင်္ကန်း
၄။ သင်းပိုင် သင်္ကန်း
၈၊ အပ် ဟု ရှစ်မျိုးရှိသည်ဟု မှတ်သားနိုင်သည်။
ဘုရားလက်ထက်က ရဟန်းလောင်းများကို ကြိုတင်သင်ပြမှုမရှိဘဲ စစ်မေးကြသဖြင့် မဖြေကြားတတ်၊ မဖြေကြားဝံ့ ဖြစ်ကြရသည်၊ သင်ပြပြန်တော့လည်း သံဃာ့အလယ်မှာ သင်ပြပြီး၊ သံဃာ့အလယ်မှာပင် စစ်မေးကြသဖြင့် အခြား သင့်လျော်ရာမှာ သင်ပြပြီးမှ သံဃာ့အလယ် မှာ မေးစစ်ဖို့ ရန်ပညတ်တော်မူရပြန်သည်၊ တစ်ဖန် မကျွမ်းကျင်သူများ သင်ပြကြသဖြင့် မဖြေကြားတတ်၊ မဖြေကြားဝံ့ ဖြစ်ကြရပြန်သည်၊ ထို့ကြောင့် ကျွမ်းကျင်သူများကသာ သင်ပြပေးဖို့ရန် ပညတ်တော်မူသည်။
စစ်မေးရမည့် အချက် ၁၅-ချက်
၁။ နူနာ ရှိသလော၊
၂။ ထွက်မြင်းအနာ အိုင်းအမာ ရှိသလော၊
၃။ ခရုသင်းအနာ ရှိသလော၊
၄။ ပန်းနာ အဆုတ်နာ ရှိသလော၊
၅။ ၀က်ရူး စသော ရူးနှမ်းသော အနာရောဂါ ရှိသလော၊
(ဤ ၅-ချက်အတွက် `နတ္ထိ ဘန္တေ´ ဟု ဖြေရန်၊ မရှိပါဘုရား-ဟု ဆိုလိုသည်)
၆။ လူသားဧကန် ဟုတ်မှန်ပါ၏လော၊
၇။ ယောက်ျားစစ်ဧကန် ဟုတ်မှန်ပါ၏လော၊
၈။ သူ့ကျွန်အဖြစ်မှ လွတ်လပ်သူ ဟုတ်မှန်ပါ၏လော၊
၉။ ကြွေးမြီမတင် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော သူ ဟုတ်မှန်ပါ၏လော၊
၁၀။ မင်းခစားယောက်ျား မဟုတ်သူ ဖြစ်ပါသလော၊
၁၁။ မိဘတို့က ကျေကျေနပ်နပ် ခွင့်ပြုအပ်သူ ဖြစ်ပါသလော၊
၁၂။ အသက် ၂၀ ပြည့်သူ ဟုတ်မှန်ပါသလော၊
၁၃။ သင့်မှာ သပိတ် သင်္ကန်း ပြည့်စုံပါပြီလော၊
(ဤ ၈-ချက်အတွက် အာမ ဘန္တေဟု ဖြေရန်၊ မှန်ပါသည် ဟု ဆိုလိုသည်)
၁၄။ သင်သည် အဘယ်အမည်ရှိသနည်း၊
(မိမိ၏ အမည်ကို ဖြေရန်)
၁၅။ သင်၏ ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာသည် အဘယ်အမည်ရှိသနည်း၊
(ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာ၏ အမည်ကို ဖြေရန်)
အန္တရာယ် ၁၃-ပါးကို မေးစစ်ရမည်ဟု လာရှိသော ပါဠိတော်အလို ၁၅-ချက် တွင် နောက်ဆုံး ၂-ချက်သည် အန္တရာယိကဓမ္မစာရင်း တွင် မပါဝင်ဟု မှတ်၊ နံပါတ် ၆. ၇. ၁၂.
အင်္ဂါရပ်မပြည့်စုံလျှင် ရဟန်းမဖြစ်၊ ကျန်အင်္ဂါရပ်များ မပြည့်စုံလျှင်ကား ရဟန်းခံ ပေးသူ သံဃာမှာသာ အပြစ်ရှိသည်၊ ရဟန်းလောင်းကား ရဟန်းဖြစ်နိုင်သည်။
ရဟန်းလောင်းများစွာကို တစ်ပြိုင်နက် သင်ပြ
ယခုခေတ် ဒုလ္လဘ ရဟန်းခံပွဲများ ခေတ်စားလာသဖြင့် ရဟန်းလောင်း သုံးလေးဆယ်ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း စုပေါင်း၍ရဟန်းခံကြသည်၊ ဤသို့ ရဟန်းခံရာ၌ ကမ္မ၀ါဖတ်ခြင်း ဟူသော ပဓာနကိစ္စ မတိုင်မီ ပုဗ္ဗကိစ္စများ၌သာ တစ်ပြိုင်တည်း စုပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်၊ ပဓာန ကိစ္စ၌ကား ၃-ပါးကိုသာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၃။ နိဂုံး ဟု ၃-ပိုင်း ပါရှိသည်၊
ဉတ် ကမ္မ၀ါစာဖြင့် သံဃာ့ကံကို ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အစည်းအဝေးသဘော ဆန်သည်၊ ရဟန်းလောင်းကို သံဃာ့အဖွဲ့က ရဟန်း အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရန် သံဃာ့ အစည်းအဝေးပြုခြင်း ဖြစ်သည်၊ သံဃာ့အစည်းအဝေး၌-
၁။ ဉတ်ဖြင့် ကြိုတင်အသိပေးသည်၊
၂။ ကမ္မ၀ါစာဖြင့် အဆိုတင်သည်၊
၃။ နိဂုံးဖြင့် အတည်ပြုချက်ကို ကြေငြာသည်။ ချဲ့ဦးအံ့- - -
ဤရဟန်းလောင်းသည် ဤမည်သော ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာ၏ တပည့် ဖြစ်သည်၊ အန္တရာယ် ကင်းသူလည်း ဖြစ်သည်၊ သူ့မှာ သပိတ် သင်္ကန်းလည်း ပြည့်စုံနေပါပြီ၊ ဖြစ်နိုင်ဆိုလျှင် သံဃာတော်က ဤရဟန်းလောင်းကို ရဟန်းပြုပေးဖို့ရာ ကြိုတင် အသိပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ရဟန်းလောင်းကို သံဃာ့အဖွဲ့က ရဟန်းပြုပေးပါသည်၊ ဤသို့ ရဟန်းပြုပေးခြင်းကို သဘောတူလျှင် နှုတ်ဆိတ်နေပါ၊ သဘောမတူသူရှိလျှင်လည်း ကန့်ကွက်ပြောဆိုပါဟု သုံးကြိမ်သုံးခါ အဆို တင်သည်။
သံဃာ့အဖွဲ့က ဤရဟန်းလောင်းကို ရဟန်းပြုပေးပြီးပါပြီ၊ သံဃာ့အဖွဲ့ကသဘောတူခြင်းကြောင့် နှုတ်ဆိတ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟု အတည် ပြုချက်ကို ကြေငြာသည်။
ဉတ် ကမ္မ၀ါစာ ဖတ်ပုံ
၁။ ပဓာနကိစ္စဖြစ်သော ဉတ်၊ ကမ္မ၀ါစာ၊ နိဂုံး ၃-ပိုင်းလုံးကို ပါဠိဘာသာဖြင့်သာ ရွတ်ဆိုရသည်၊
၂။ ထိုသို့ ရွတ်ရာ၌လည်း စည်းကမ်းနှင့်အညီ ယုတ်လျော့မှု ဖောက်ပြန်မှုမရှိစေဘဲ မှန်ကန်ပီသစွာ ရွတ်ဖတ်နိုင်မှသာ ရဟန်းခံကိစ္စ ပြီးစီးအောင်မြင်နိုင်သည်၊ ထို့သို့ မဟုတ်လျှင် ရဟန်းမဖြစ်နိုင်။
ဉတ်ကမ္မ၀ါစာဖတ်သင့်သူဟူသည်- ပင်ကိုယ်အရည်အသွေးလည်းရှိ၊ တကယ် လက်တွေ့လည်း စွမ်းဆောင်နိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာ ဖြစ်သည်။
ရဟန်းလောင်းကို ဉတ် ကမ္မ၀ါစာဖတ်၍ ရဟန်းပြုပေးရာ၌ တတိယ ကမ္မ၀ါစာ ``သော ဘာသေယျ´ ပြီးဆုံးလျှင် ရဟန်းဖြစ်တော့သည်။ ရဟန်းဖြစ်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ရဟန်းသစ် သန္တာန်၌ ပါရိသုဒ္ဓိသီလ ၄-မျိုး တစ်ခါတည်းတည်ပြီး ဖြစ်တော့သည်၊ ၂၂၇-သွယ်၊ အကျယ် အားဖြင့် ကုဋေ ကိုးထောင်ကျော်သော အဓိသီလသိက္ခာများ တည်ရှိသွားတော့သည်၊ ယင်းသီလများနှင့် ပြည့်စုံသွားသောကြောင့် ပုထုဇဉ်ပင် ဖြစ်စေကာမူ သေက္ခအရိယာ ပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ ထည့်သွင်း ရေတွက်အပ်၏၊ မြင့်မြတ်သော ဥပသမ္ပန္နပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သို့ ရောက်သွားသည်။
ရဟန်းဖြစ်သွားသောသူသည် မိမိက ပုထုဇဉ်ပင်ဖြစ်စေကာမူ ရဟန္တာဖြစ်သူ လူသာမဏေတို့၏ ရှိခိုးမှုကို ခံထိုက်သည်၊ ကုဋေကိုးထောင် ကျော်သော သိက္ခာပုဒ်တို့၏ တည်နေ ကိန်းဝပ်ရာ စေတီအရာ၌ တည်သည်၊ ဤသို့ ဖြစ်ရခြင်းသည် မြတ်စွာဘုရား၏ အစိန္တေယျ အပ္ပမေယျ ဘုန်းတော်၊ ကံတော်၊ ဥာဏ်တော်၊ တန်ခိုးတော်၊ အာဏာတော်၊ ပညတ်တော်တို့၏ အစွမ်းပေတည်း။
ရဟန်းချင်းတူစေကာမူ ရဟန်းဖြစ်ရှေးကျ၍ သိက္ခာဦးသော ပုထုဇဉ်ရဟန်းကို သိက္ခာတည်မှု ရဟန်းဖြစ်မှုနောက်ကျသော ရဟန္တ္တာရဟန်း က ရှိခိုးရသည်၊ ရဟန်းအဖြစ်၏ အကျိုးဂုဏ် အာနိသင်တို့က မရေမတွက်နိုင်အောင် များလှသည်၊ ဒုဿီလ(သီလမရှိသူ)ချင်းတူစေကာ မူ လူဒုဿီလထက် ဂုဏ် ၁၀-မျိုးတို့ဖြင့် သာလွန်ရုံသာမက အလှူဒါနကိုလည်း အကြောင်း ၁၀-မျိုးတို့ဖြင့် စင်ကြယ်စေနိုင်သည်၊ သီလ ရှိသူ ရဟန်းဖြစ်ပါမူကား အဘယ်ဆိုဘွယ်ရှိအံ့နည်း။
သံဃာက ပေးသော သင်္ကန်းအရှိန်အ၀ါသည် ကြီးမြတ်လှသည်၊ သင်္ကန်းသည် ရဟန္တာတို့၏ အလံတံခွန်ဖြစ်သည်၊ လမ်းခရီး၌ မစင် လိမ်းကျံလျက် စွန့်ပစ်ထားအပ်သော သင်္ကန်းဖြစ်စေကာမူ တွေ့မြင်က ဦးထိပ်၌ လက်အုပ်ချီကာ ရသေ့၊ ရဟန်းတို့၏ အောင်လံ တံခွန် ဖြစ်သော သင်္ကန်းကို ရှိခိုးရမည်။
သင်္ကန်းဝတ်သူကို- သိတတ်သည့် သူတော်ကောင်းများသည် မသတ်ပုတ် မညှင်းဆဲထိုက်၊ လူ့ဘ၀ ဖြင့် ရဟန္တာဖြစ်သူသည် သင်္ကန်း မ၀တ်လျှင် ထိုနေ့မှာ ပရိနိဗ္ဗာန် စံရတော့သည်၊ သင်္ကန်းဝတ်လိုက် မူကား အသက်တမ်းအတိုင်း တည်နိုင်သည်၊ သင်္ကန်း၏ အရှိန်အ၀ါ ကား ဤမျှ ကြီးမားလှပါသည်။
ရဟန်းဖြစ်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ရဟန်းသစ် သန္တာန်မှာ အဓိသီလသိက္ခာ တည်ပြီးဖြစ်၍ ရဟန်း အဖြစ်သို့ ရောက်ချိန်စောသူ ရှေးကျသူကို သိက္ခာကြီးသူ ဟု ခေါ်သည်၊ နောက်ကျသူကိုကား သိက္ခာငယ်သူ ဟု ခေါ်ရမည်၊ သာသနာတော်မှာ သိက္ခာကြီးသူ သိက္ခာငယ်သူ အသီးသီးနှင့် ဆိုင် သော ၀တ္တရားများရှိ၏၊ ထေရ်စဉ်ဝါလိုက် သိက္ခာ ၀ါနှင့်ဆိုင်သော ကိစ္စတိုင်းမှာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ရဟန်းဖြစ်ချိန်ကို တိကျ သေချာစွာမှတ်သားထားရမည်၊ ရဟန်းသစ်အားလည်း ပြောထားရသည်၊ ရဟန်းဖြစ်ချိန်မှတ်တမ်းကိုကြည့်၍ ၀ိနည်းတော်နှင့်အညီ ရဟန်း ဖြစ်လာသူ ဟုတ်/ မဟုတ် သိနိုင်သည်။
ရဟန်းခံ ရှင်ပြုအကြောင်း သိကောင်းစရာ - အပိုင်း(၃)
ပူတိမုတ္တဆေးသည် မွန်မြတ်သော ဆေးဖြစ်သော်လည်း သင့်လျော်သော အကောင်းရှိက ထောပတ်၊ ဆီဦး၊ ဆီ၊ ပျားရည်၊ တင်လဲ ဟူ သော ဆေး ၅-မျိုးနှင့် ဗိန္ဓောဆေးများကိုလည်း လိုအပ်သလို သုံးနိုင်ရန် အပိုခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပါသည်။
(ဆောင်ရန်) ပစ္စည်း ၄-ပါး သုံးဆောင်နည်း
``မှီရာလေးသင်း၊ မာရ်ကျော့ကွင်း၊ ၀ဋ်တွင်း နက်လေစွ´´ ဟူသည်နှင့် အညီ ပစ္စည်း ၄-ပါး၌ သာယာငြိတွယ်၍ ကျော့ကွင်းမိခဲ့လျှင် ၀ဋ်ဒုက္ခတွင်း နစ်မွန်းရသည်၊ ပစ္စည်း ၄-ပါး ရှာမှီးရာ၊ သုံးစွဲရာတို့၌ ကျွမ်းကျင် လိမ္မာဖို့ အရေးကြီးသည်၊ ၀ိနည်းတော်နှင့် အညီ ရှာမှီး တတ်ဖို့ သုံးစွဲတတ်ဖို့ လိုသည်၊ ငှက်ပျော ဝါး ကျူပင်တို့ကို မိမိအသီးက ပြန်၍ သတ်ဖြတ်သကဲ့သို့ ပစ္စည်းလာဘ်လာဘက ရဟန်းကို ပြန်၍ သတ်ပါသည်။
ပစ္စည်း ၄-ပါးသည် သုံးတတ်လျှင်ကား ဆေး၊ မသုံးတတ်လျှင် ဘေး ဖြစ်တတ်ပါသည်၊ ဘေးမဖြစ်ရန် သုံးစွဲနည်း ပစ္စဝေက္ခဏာတို့ကို လည်း မြတ်စွာဘုရားက ထပ်မံ၍ ညွှန်ကြားတော်မူခဲ့ပါသေးသည်။
လုံးဝ မပြုထိုက်သော အရာ (ရှောင်ရန်) ၄-မျိုး
ဆောင်ရန် သိဖို့ထက် ရှောင်ရန် သိဖို့က ပို၍ အရေးကြီးပါသည်၊ လွန်ကျူးမိက ကုစား၍ မရနိုင်ကောင်းသော ပြစ်မှုမျိုးလည်း ရှိတတ် သေးသည်၊ မီးခဲကိုကိုင်မိ၍ အပူလောင်ခံရသော အနာကို ဆေးကုလို့ရနိုင်သည်၊ ၆၆၀၀-ရှိ မဟာဓာတ်အားလိုင်း လျှပ်စစ်ကြိုးကို ကိုင်မိလျှင် တစ်ခါတည်း မီးလောင်ပြာကျပြီး သေသွားမည်၊ ဆေးကုလို့မရတော့၊ ထို့အတူ သံဃာဒိသေသ် စသော အာပတ်အပြစ်များ ကျူး လွန်မိလျှင် ကုစား၍ ရနိုင်သေးသည်၊ ပါရာဇိကပြစ်မှုမျိုးကို ကျူးလွန်မိလျှင် တစ်ခါတည်း ရဟန်းဘ၀ ဆုံးရှုံး သွားတော့သည်၊ တစ်ဖန် ရဟန်းကောင်းဖြစ်အောင် ကုစား၍ မရနိုင်တော့၊ ဘုရားလက်ထက်က ရဟန်းတော်လေးတစ်ပါး ရဟန်းခံပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း မသိ နား မလည်သဖြင့် မယားဟောင်းနှင့် လွန်ကျူးမိသွား၏၊ ရဟန်းဘ၀ဆုံးရှုံးသွားကြောင်း နောက်မှသိရသည်၊ ထိုအဖြစ်မျိုး မကြုံမိစေရန် မှီရာ ၄-ပါးကို ပြောကြားပြီးနောက် မပြုထိုက်သော အရာ ၄-ပါးကို ပြောထားရန် မြတ်စွာဘုရားက မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။
၁။ လည်ပင်းပြတ်သွားသော ယောက်ျားသည် တစ်ဖန် အသက်မရှင်နိုင်၊ ထို့အတူ မေထုန်မှီဝဲလျှင် ရဟန်းအဖြစ် ဆုံးရှုံးသွားတော့သည်၊ ထို့ကြောင့် ရဟန်းဘ၀မှာ နေသမျှ ကာလပတ်လုံး မေထုန်မမှီဝဲရ။
၂။ အညှာမှ ကြွေကျပြီးသော သစ်ရွက်ရော်သည် နောက်ထပ် တစ်ဖန် စိမ်းလန်း ခြင်းငှါ မထိုက်တော့၊ ထို့အတူ တမတ် တမတ်တန် သော ဥစ္စာ၊ တမတ်ထက် ပိုလွန်သော ဥစ္စာတို့ကို ခိုးယူမိလျှင် ရဟန်းဘ၀ ဆုံးရှုံးရတော့သည်၊ ထို့ကြောင့် သူတပါး ဥစ္စာကို မြက်၊ ၀ါး ခြမ်းစိတ်မှ စ၍ မခိုးယူရ။
၃။ နှစ်ခြမ်းကွဲပြီးသော ကျောက်ဖျာကြီးသည် ပကတိအတိုင်း တဖန် ပြန်ဆက်စပ်၍ မရနိုင်သကဲ့သို့ လူဇာတ်ရှိသူကို သတ်မိလျှင် ရဟန်း မဟုတ်တော့၊ ထို့ကြောင့် သူတပါး အသက်မှန်သမျှကို မသတ်ရ။
၄။ လည်ဆစ်ပြတ်လေပြီးသော ထန်းပင်သည် တဖန် စည်ပင် ပြန့်ပွါးခြင်းငှါ မထိုက် တော့သကဲ့သို့ မိမိသန္တာန်ဝယ် တကယ်မရှိသော ဈာန် မဂ် ဖိုလ် တရားများကို လိမ်ညာပြောမိလျှင် ရဟန်းမဟုတ်တော့၊ ထို့ကြောင့် လိမ်ညာမပြောရ၊ လိမ်ညာ ပြောခြင်းအမှုကို ရဟန်း ဘ၀မှာ နေသမျှ ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
ရဟန်းဖြစ်ချိန် မှတ်တမ်း၊ ဆောင်ရန် ၄-ပါး၊ ရှောင်ရန် ၄-ပါး တို့ကို ပြောကြား ပြီးနောက် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် ၀တ္တရားများ မလစ် ဟင်းစေရန်နှင့် လစ်ဟင်းမှုရှိက သက်သာခွင့်ရရန် လမ်းညွှန်ချက် ပေးရသေးသည်၊ ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာနှင့် ကမ္မ၀ါစာ ဆရာတို့သည် ရဟန်း ဖြစ်အောင် ချီးမြှောက်ပေးကြသော ဆရာရင်းများ ဖြစ်ကြသည်၊ ရဟန်းခံရာတွင် သံဃာအရေအတွက် ပြည့်မီအောင် ပါဝင်သူ ကာရက သံဃာများသည်လည်း ရဟန်းသစ်၏ ကျေးဇူးရှင်များပင် ဖြစ်ကြ၏၊ သာသနာတော်တွင်း၌ ဆရာတပည့်အချင်းချင်း ဆက်ဆံရေးဝတ္တရား များရှိကြသည်၊ ၀တ္တရားမကျေပွန်လျှင် အာပတ်အပြစ်ဖြစ်ရုံမက သီလကိုလည်း ဖြည့်ကျင့်သည်မမည်၊ သီလမစင်ကြယ်က စိတ်တည်ငြိမ် မှုမရှိဘဲ မဂ် ဖိုလ် နိဗ္ဗာန်ကိုလည်း မရနိုင်၊ ထို့ကြောင့် ဆရာတပည့်တို့ တာဝန်ကိုယ်စီ ဖြည့်ကျင့်ကြရသည်၊ ဆရာတပည့် အနေကွာခြင်း စသော အကြောင်းကြောင့် ၀တ္တရားမပြုနိုင်ခဲ့သော် အပြစ်မှ သက်သာခွင့်ရရန် နားလည်မှုယူပြီး ခွင့်ပြုထားလျှင် အပြစ်လွတ်နိုင်သည်။
`ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာ ကမ္မ၀ါစာဆရာ ကာရကသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ဘုရား၊ အရှင်မြတ်တို့အပေါ်၌ တပည့်က ပြုရမည့် ၀တ္တရားများစွာပင် ရှိပါသည်ဘုရား၊ နေရာတပါး ဝေးခြားခြင်းစသော အကြောင်းကြောင့် ခွင့်ပြု၍ရစကောင်းသော ၀တ္တရားများကို မပြုဘဲနေနိုင်ရန် ခွင့်လွှတ် တော်မူပါဘုရား၊ ဘုရားတပည့်တော်အပေါ်၌ အရှင်မြတ်တို့ ပြုရမည့် ၀တ္တရားများကိုလည်း တပည့်တော်က မသာယာဘဲ ခွင့်လွှတ်ပါသည် ဘုရား´။
ရှင်သာမဏေနှင့် ရဟန်းနှစ်ဦးစလုံးသည် လူ့ဘောင်ကို စွန့်ခွါပြီး အိမ်ရာမထောင် သာသနာ့ဘောင်၌ သာသနာ့တာဝန်များကို ထမ်းဆောင် နေသူများ ဖြစ်သည်၊ သာသနာ့တာဝန် ဟူသည် အချုပ်အားဖြင့် ဂန္ထဓုရ၊ ၀ိပဿနာဓုရ- ဟု နှစ်မျိုးသာ ရှိသည်၊ သင်ယူလေ့ကျင့်ရေး တာဝန်၊ ကျင့်ကြံရေးတာဝန် ဟု ဆိုလိုသည်၊ အနည်းငယ် ချဲ့ဦးအံ့--
၁။ ဂန္ထဓုရ- ပိဋကတ်စာပေကျမ်းဂန် သင်အံပို့ချရေးတာဝန်။
၂။ ၀ိပဿနာဓုရ- ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာ ပွါးများအားထုတ်ရေးတာဝန်။
`ရဟန်းကိစ္စ၊ နှစ် ဓုရ၌၊ လုံ့လအားသည်း၊ ဟိတ်ဟန်နည်း၍၊ ပစ္စည်းမသို၊ စိတ်မတို၊ ခင်ပျို ကြီးပွါးကြောင်း´ဟု မိန့်ဆိုကြသည်။
ပိဋကတ်စာပေကျမ်းဂန် သင်ကြားနေကြသော ဂန္ထဓုရပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ရည်ရွယ်ချက် သုံးမျိုးဖြင့် သင်ကြားနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
၁။ မြွေဖမ်းတတ်ခြင်းနှင့် တူသော သင်ယူပုံ၊
၂။ သံသရာဝဋ်ဒုက္ခမှ ထွက်မြောက်ရန် အကျိုးကို မျှော်ကိုး၍ သင်ယူပုံ၊
၃။ ဘဏ္ဍာစိုးနှင့် တူသော သင်ယူပုံ။
စာပေကျမ်းဂန် သင်ယူရာတွင် အချို့က သူတပါးကို နှိမ်ရန် ၀င့်ကြွားရန်၊ ဘုန်းကြီးရန် စသော လောဘ ဒေါသ အကုသိုလ်မူလ အရင်း ခံဖြင့် သင်ယူကြသည်၊ ထိုသင်နည်းမျိုးကို မြွေဖမ်းတတ်ခြင်းနှင့်တူသော သင်ယူနည်းဟုခေါ်သည်၊ မြွေဖမ်းသောအခါ အဖမ်းမတတ်လျှင် ထိုမြွေ ကိုက်၍ သေသော်လည်း သေရာ၏၊
ထို့အတူ လောဘ ဒေါသ အကုသိုလ်မူလ အရင်းခံဖြင့် သင်ကြားလျှင် ထိုအကုသိုလ်ကပင် မိမိကို အပါယ်သို့ ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မည်။
သီလ သမာဓိ ပညာ ဖြည့်ကျင့်ဖို့ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သင်ယူခြင်းကို သံသရာဝဋ်ဒုက္ခမှ ထွက်မြောက်ရန် အကျိုးကို မျှော်ကိုး၍ သင်ယူ နည်း ဟု ခေါ် သည်။
ထိုသင်ယူခြင်းမျိုးသည် မြွေဖမ်းတတ်သဖြင့် မြွေကိုက်မခံရသကဲ့သို့ လိုအပ်သော အကျိုးပြီးမြောက်နိုင်သည်။
သာသနာတော်၌ ကိစ္စအားလုံး ပြီးပြည့်စုံနေသော ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည် သူတော်ကောင်းတရားကို စောင့်ရှောက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သာ သင်ယူ၏၊ မိမိအတွက် ရည်ရွယ်ချက်မရှိ၊ ထိုသင်ယူခြင်းမျိုးကို ဘဏ္ဍာစိုးနှင့် တူသော သင်ယူနည်းဟု ခေါ်သည်။
ဆိုခဲ့ပြီးသော သုံးမျိုးတွင် နံပါတ် ၂-သင်ယူနည်းမျိုးဖြင့် သင်ယူမှသာလျှင် ရှင် ရဟန်းပြုရကျိုးနပ်နိုင်ပါသည်၊ အချို့လည်း ငယ်ရွယ်စဉ် နံပါတ် ၁- သင်ယူနည်းမျိုးဖြင့် သင်ယူရင်းပင် ပိဋကတ်တော်၏ အနှစ်သာရများကို သိရသဖြင့် နံပါတ် ၂-သင်ယူနည်းမျိုးသို့ ပြောင်းလဲ သွားသည်ကို အများအပြား တွေ့ရပါသည်။
ပရိယတ်နှင့် ပဋိပတ်သည် ခွဲလို့ မရ၊ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မှီတွယ်နေသည်၊ တစ်ချို့က ပေါဋ္ဌိလမထေရ်ကို ပုံစံထုတ်၍ ပရိယတ်ကို ပုတ်ခတ် နေကြပါသည်၊ စာသင် စာချနေသူများကို နွားနို့မသောက်ရသော နွားကျောင်းသား ပမာထားလျက် သနားသယောင်ယောင်ပြု၍ ပြက်ရယ် ပြုနေကြပါသည်၊ ထိုသူများ၏ အဆိုကြောင့်-
`တရားမနာ၊ စာပေ မသင်၊ နှုတ်တွင် မဆောင်၊ သိအောင် မပြု´ လျှင်သော်လည်းကောင်း-
`စာသင် ပယ်လျော၊ ကျယ် မဟောကြ၊ ကျယ် မချနှင့်၊ ကျယ်စွ မအံ၊ မကြံမစည်´လျှင်သော်လည်းကောင်း-
သို့ဖြစ်လျှင် သာသနာကွယ်ခြင်း၌ မည်သူ့အပေါ်မှာ တာဝန်ရှိပါသနည်း၊ ပညာရှိများ စဉ်းစားရန်၊ လူထွက်လို၍ တိုင်ပင်ရာတွင် သပိတ် သင်္ကန်းကို လိုချင်သဖြင့် အားပေးမိသောကြောင့် ၇-ကြိမ် လူထွက်ရသော စိတ္တဟတ္ထထေရ်၏ ၀ဋ်ကြွေးကိုလည်းကောင်း၊ စာချဘုန်းကြီး ဘ၀က စာသင်သား စိတ်ဓာတ်ကျအောင် ပြောဆိုမိသဖြင့် ဂါထာလေး တစ်ဂါထာကိုပင် တစ်ဝါတွင်းလုံးရအောင် မကျက်နိုင်သော ရှင် စူဠပန်၏ ၀ဋ်ကြွေးကိုလည်းကောင်း နှလုံးမူ၍ စာသင်နေသူများ စိတ်ဓာတ်ကျအောင် မပြောမိဖို့ သတိပြုရမည်။
နံပါတ် ၂-သင်နည်းဖြင့် စာပေကျမ်းဂန်သင်ယူလျှင် ကိလေသာ ၀င်ခွင့်မရ၊ သီလ သမာဓိ ပညာ ရင့်ကျက်ပြီး မလိဃဒေ၀ ထေရ်ကဲ့သို့ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ပင် ဆိုက်ရောက်နိုင်သည်၊ ကိုင်းကျွန်းမှီဆိုသကဲ့သို့ ပရိယတ် ပဋိပတ် နှစ်ရပ်တို့သည် အချင်းချင်း အင်အားပြုမှ ကြီးပွါး တိုးတက်နိုင်ကြမည်။
`ငါ ပရိယတ်သမား၊ ငါ ပဋိပတ်သမား´ဟု ကြွေးကြော်ရုံမျှနှင့် မပြီးပါ၊ ပရိယတ်သည် ပစ္စည်း ၄-ပါး ကျောထောက် နောက်ခံရှိသည်၊ ပဋိပတ်သည် ဓုတင် ကျောထောက် နောက်ခံ ရှိသည်။
စန္ဒကူးနှစ်ကို ရလိုလျှင် စန္ဒကူးပင်ကြီးမှ အပွေး အခေါက် အခွံ အကာတို့ကို ပယ်ရှားပစ်ရမည်၊ အပွေး အခေါက် အခွံ အကာတို့ဖြင့်သာ တင်းတိမ်နေလျှင် စန္ဒကူးနှစ်ကို မရနိုင်၊ ထို့အတူ သာသနာ့ဘောင် ၀င်၍ ရှင် ရဟန်းပြုနေခြင်းသည် အရဟတ္တဖိုလ် အနှစ်ကို ရှာဖွေနေ ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
၁။ အချို့က အပေါ်ယံ အပွေးမျှဖြစ်သည့် လာဘ သက္ကာရ သိလောက (လာဘ်ရမှု၊ အပူဇော်ခံရမှု၊ အရှိန်အ၀ါရှိမှု)နှင့် တင်းတိမ်နေ၏။
၂။ အချို့က တဆင့်တက်ပြပြီး အခေါက်ပမာ သီလမျှဖြင့် တင်းတိမ်နေသည်။
၃။ အချို့ကလည်း တတိယဆင့် အခွံနှင့်တူသော ဈာန်သမာဓိလောက်ကို အဟုတ် ကြီး ထင်နေပြန်သည်။
၄။ အချို့မှာ စတုတ္ထဆင့် အမြင်ထူးရ တန်ခိုးပြနိုင်ခြင်းဟူသော အဘိညာဉ်ကိုပင် ရဟန္တာအဖြစ် ထင်နေကြသည်၊
အဘိညာဉ်သည် သာသနာတော်၏ အကာမျှ ဖြစ်နေသည်ကို မသိကြပေ။
၅။ တကယ့်အနှစ် အရဟတ္တဖိုလ်အစစ်ကို ရလိုလျှင်-
လာဘ သက္ကာရ သိလောက- အပွေး၊ သီလ- အခေါက်၊ သမာဓိ- အခွံ၊ အဘိညာဉ်- အကာတို့ကို ပစ်ပယ်ရမည်၊
မလိုအပ်သည်များကို ပယ်ရှား၍ အရဟတ္တဖိုလ်အနှစ်ကို ရယူနိုင်မှသာ အစ၌ ဆိုခဲ့သော ဒုက္ခကင်းရေးရည်ရွယ်ချက် အထမြောက်ပေမည်။
အချုပ်ဆိုရသော် သတ္တ၀ါတိုင်း ဒုက္ခနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသည်ချည်းဖြစ်၍ ဒုက္ခကင်းလိုကြသည်၊ ဒုက္ခကင်းရေး နည်းလမ်းအစစ်ကား ဗြဟ္မ စရိယပင်ဖြစ်သည်၊ ဗြဟ္မစရိယကို ပြည့်စုံဖြူစင်စွာ ဖြစ်အောင် ကျင့်ကြံဖို့ရာလည်း ရဟန်းပြုကြသည်၊ ရှင်သာမဏေ ဖြစ်ခွင့်ကို သရဏဂုံ ဖြင့် ပြုရသော နည်းတစ်မျိုးကိုသာ ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့သည်။
`ဧဟိ သရဏ၊ သြ၀ါဒ၊ ပဉ္စ ဂရုဓမ်။
ဒူတေ အဋ္ဌ၊ ဉတ္တိပြ၊ ရှစ်ဝ ရဟန်းမှန်´ဟူ၍ ၈-မျိုး ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့သည်။
ထို ၈-မျိုးတို့တွင် ဉတ္တိစတုတ္ထကမ္မ၀ါစာဖြင့် ရဟန်းပြုပေးနိုင်သော စနစ်တစ်ခုသာ ယနေ့ထက်တိုင် ရှင်သန်လျက် ရှိနေပေသည်၊ ထိုစနစ် ကို မြတ်စွာဘုရားသည် မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃-ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလပြည့်နှင့် တပေါင်းလပြည့် အကြားလောက်မှာ စတင်ပညတ်တော်ခဲ့သည်၊ သာသနာတည်သရွေ့ တည်ရှိမည့် နည်းစနစ်လည်း ဖြစ်သည်၊ မြတ်စွာဘုရားသည် ရှင် ရဟန်းပြုခွင့်ပေးရာမှာ ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ဖြစ်စေ နိုင်သည့် ဥပဓိသမ္ပတ္တိရှိသူများကိုသာ ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
ရှင် ရဟန်းဖြစ်ခွင့်ရသူများသည် အဓိသီလ သိက္ခာပုဒ်များ၏ တည်ရာ စေတီအိမ်များဖြစ်၍ လူ နတ် ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါ အားလုံး၏ ရှိခိုး ဦး ခိုက်မှုကို ခံထိုက်ကြရသည်၊ မြတ်စွာဘုရားသည် တပည့်သားများတွက် အာမိသအမွေ၊ ဓမ္မအမွေ နှစ်မျိုးလုံးကိုပေးခဲ့ပါသည်၊ တပည့်သား များကလည်း ရရှိသည့် အမွေပစ္စည်း နှစ်မျိုး စလုံးကို အသုံးချဖို့လိုပါသည်။
`သံသာရ၀ဋ္ဋဒုက္ခတော မောစနတ္ထာယ´ဟူသော မူလရည်ရွယ်ရင်းကိစ္စ ပြီးမြောက်မည်မဟုတ်ပါ၊ ပစ္စည်း ၄-ပါး အာမိသအမွေကို တရား နှင့်အညီ သုံးဆောင်ခြင်း၊ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ လိုက်နာခြင်းတို့ဖြင့် ဓမ္မအမွေကိ်ု ခံယူမှသာ ဒုက္ခကင်းရေး ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်မည် ဖြစ် ကြောင်း တင်ပြရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါသည်။
Labels: ဗဟုသုတ, ဘာသာရေးဆောင်းပါး